Xiddig ka tirsan kooxda Arsenal oo codsaday in laga fasaxo Emirates Stadium – Gool FM
(London) 25 June 2019. Xiddig ka tirsan kooxda ka dhisan waqooyiga magaalada London ee Arsenal ayaa codsaday inuu isaga dhaqaaqo Emirates Stadium inta lagu gudi jiro suuqa kala iibsiga xagaaga ee haatan socda.
Wargeyska “Corriere dello Sport” ee dalka Talyaaniga ayaa sheegay in Lucas Torreira uu ku wargaliyay maamulka Arsenal in shaqsi ahaan uusan ku faraxsaneyn kooxda reer London, wuxuuna hadalkiisan imaanayaa kaddib markii uu si fiican isugu muujiyay Emirates Stadium.
23 jirkan ayaa xagaagii lasoo dhaafay ku soo biiray kooxda uu hogaamiyo macalinka reer Spain ee Unai Emery, isagoo kaga soo dhaqaaqay Sampdoria, wuxuuna ciyaaryahan muhiim ah ka noqday naadiga ka dhisan waqooyiga magaalada London ee Gunners xilli ciyaareedkii hore.
Lucas Torreira ayaa doonaya inuu mar kale ku laabto Italy, wuxuuna xiiso u qabaa inuu la shaqeeyo tababarihiisii hore ee kooxda Sampdoria ee Marco Giampaolo, kaasoo dhawaan qabtay shaqada tababarka ee AC Milan.
Xili Arsenal aysan dooneynin inay iska fasaxdo Torreira, hadana AC Milan ayaa rabitaan xoogan ka muujisay inay hesho ciyaaryahanka reer Uruguay, mana dooneyso inay ka maqasho wax diidmo ah ee kaga timaada kooxda reer England.
Si kastaba ha ahaatee, kooxda Arsenal ayaa codsatay in miiska loo saaro aduun dhan 35 milyan euro si ay u fasaxdo laacibkeeda Lucas Torreira, xili ay Milan isku diyaarineyso dhankeeda inay gudbiso dalab rasmi ah ee aan ka badneyn 30 milyan oo euros.